अब तीने महिने तालिम नलिई बिहे गर्न नपाइने ? - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com अब तीने महिने तालिम नलिई बिहे गर्न नपाइने ? - नागरिक रैबार
एजेन्सी-इण्डोनेसियामा बिहे गर्नका लागि अब ३ महिनाको तालिम पास गर्नुपर्ने नियम सुरु हुँदैछ । मिडिया रिपोर्ट अनुसार इण्डोनेसिया सरकारले सन् २०२० देखि प्री-वेडिङ कोर्स अर्थात् विवाहपूर्व पाठ्यक्रम निःशुल्क रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
मात्र १ इन्चको स्क्रिन भएको विश्वको सबैभन्दा सानो आकारको ल्यापटप । सुन्दैमा अनौठो जरुर लाग्छ । तर एकजना व्यक्तिले यो विशेष खाले ल्यापटप तयार पारेका छन् । विश्वकै सानो ल्यापटप बनाउने व्यक्तिको नाम पल क्लिन्गर हो । उनले बनाएको उक्त ल्यापटपको नाम ThinkTiny हो । यो ल्यापटप IBM को थिंकप्याडको सानो रुप हो । हाल […]
एजेन्सी, । टिकटक अहिले सबैभन्दा लोकप्रिय एप बनिरहेको छ । कतिपय मानिसहरु टिकटकको पागलपनमा ज्यान दिनसमेत पछि पर्दैनन् । भारतमा हालैका दिनमा टिकटकसँग जोडिएका केही अनौठा घटना भएका छन् । शिरडीमा बिहीबार टिकटक भिडियो बनाइरहेको समयमा गोली चल्दा एक व्यक्तिको ज्यान गएको छ । त्यस्तै तमिलनाडुमा एक महिलाले पतिको गालीबाट रिसाएर टिकटकमै आफ्नो अन्तिम भिडियो […]